Milan, Barcelona, Arsenal Iyo Juventus Oo Ku Hirdamayay Xidig 19 Jir Ah
HomeSuuqaMilan, Barcelona, Arsenal Iyo Juventus Oo Ku Hirdamayay Xidig 19 Jir Ah
Weeraryahanka kooxda Rubin Kazan ee Sardar Azmoun ayaa xaqiijiyey inay soo gaadheen dalabyo toos ah oo ay ku doonayaan kooxaha afarta ah ee Arsenal, Barcelona, Juventus iyo AC Milan.
Laacibkan 19 jirka ah oo shabaqa dhigay saddex gool 10 kulan oo uu saftay horyaalka sanadkan ee wadanka Ruushka ayaa sheegay in heshiis la galidiisa ay si weyn u doonayaan kooxaha ugu tunka iyo taagta weyn qaarada Yurub.
Azmoun oo aan ilaa hadda lagu soo darin xulka qarankiisa Iran, ayaa ku nuux nuuxsaday inuu u dhaw yahay inuu ku biiro kooxda Arsenal maadaama aan Barcelona loo ogolayn, Ganaaxii iibsashada ciyaaryahanada ee FIFA saartay darteed.
“Waxaan hellay dalabyo iiga yimid 3 ka mid ah kooxaha ugu waaweyn Yurub ee ay kamidka yihiin . Arsenal, AC Milan iyo Juventus,” ayuu Azmoun ku yidhi waraysi uu siiyey Television ka wadanka Iran ee Navad.
“Waxaa sidoo kale isoo gaadhay dalabka Barcelona, laakiin xayiraada dhinaca iibsiga ciyaartowda ee saaran darteed , kooxdaasi hawada way ka baxday imika .
“Wada hadalada Milan iyo Arsenal ayaa si xoogleh u socda. labada naadiba waxay wada hadal la sameeyeen kooxda Kazan.
“Laakiin ani ahaan waxaan muhiimada siinayaa inaan xooga saaro Kazan. ciyaaro ayaa noo baaqi ah, CIyaarahaas kadib ayaan go’aan gaadhi doonaa.
Pele : Brazil Waa Inay Iska Celisaa Spain
Manchester City Oo Kaalinta Labaad Si Ku Meel Gaadh Ah U Fadhiisatay Iyo Chelsea Oo Karbaash Ku Dhacay